Single Hole Basin ရောနှောစက်၊ နစ်မြုပ်သည့်ရောနှောစက်၊ တရုတ်ပေးသွင်းသူမှရှေးဟောင်းအင်တုံရောနှောစက်
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:လူပျို Hole အင်တုံရောနှော,သင်္ဘောနစ်မြုပ်စေသောအရော,ရှေးဟောင်းအင်တုံရောနှော,ဖုံးကွယ်အင်တုံရောနှော,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အင်တုံရောနှောထိပုတ်ပါ > ဝှမ်းအေးထိပုတ်ပါ
ဝှမ်းအေးထိပုတ်ပါ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လူပျို Hole အင်တုံရောနှော, သင်္ဘောနစ်မြုပ်စေသောအရော ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရှေးဟောင်းအင်တုံရောနှော R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကြေးဝါအင်တုံ Faucet Cold ရေချိုးခန်းထိပုတ်ပါ
ရေအေး Outdoor ဝှမ်းကြေးဝါ Faucet
လူပျို Cold Square ခေတ်ပြိုင်လီဗာထိပုတ်ပါ
ရေချိုးကန်နှင့်ထိတွေ့မှုအတွက် ၁.၂ လက်မတိုင်
ကြေးဝါခရုမ်း Chrome ပြီးစီးခဲ့ Wall Mounted Basin Taps
1/2 လက်မ Chrome လူပျိုအအေးခံတိုင်များ
အိမ်သာ Single-control chrome လူပျို Cold Pillar Taps
Chrome ဖြင့်သုတ်ထားသောကြေးဝါရေကန်စုပ် Cold Basin
ကြေးဝါခရုမ်း chrome အလျင်အမြန် - ပွင့်လင်းတစ်ခုတည်းအေးတိုင်တိုင်ထိပုတ်
ရေချိုးခြင်းအင်ဂျင်ဝှမ်း Cold Tap ကိုလိမ်လည်ပတ်သောခလုတ်ပါသော
ဖက်ရှင်တစ်ခုတည်းအေးခုံတန်းရှည် Chrome Basin Faucet
စတိုင်ရင်ပြင်အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်း Cold Chrome အင်တုံ faucet
ကြေးဝါ Chrome ကိုလူပျို Cold အိမ်သာ faucet
လူပျို Cold Faucet ရေပိုက်ရေချိုးခန်းရေချိုးခန်း Faucet
နေရာလေးကို အဆိုပါလူပျို Hole ဝှမ်းပုတ်တစျဦးဖွစျသညျ faucet တစ်ခုတည်းအအေးအင်တုံ။ ၎င်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရေအေးဖြစ်သောရေဝင်ပေါက်တစ်ခုသာရှိသည်။ Handy ၏ ရေချိုးခန်းရေကန်သည် Basin Cold Tap သည်အဓိကအားဖြင့်အများသုံးနေရာများ၊ ရေပူမရှိသောနေရာများ၊...
faucets ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Hand Mix ၏ Mixer Faucet နှင့် sxsteen နှစ်အတွေ့အကြုံများရှိသည် Shower Faucet ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီး ၅၀ ကျော်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းဆု ၃၀၀ ကျော်တို့သည်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည် ယနေ့ Basin...
ကြယ်ပွင့်ကိုကြော်ငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိသောကြောင့်သာမန်ဖြစ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းသင်ကြားဖူးမည်မဟုတ်ပါ၊ \_ t တီဗွီကြော်ငြာတွေမှာဘယ်တုန်းကမှမပါဝင်ဖူးဘူး၊ သို့မဟုတ်သင်က Guangzhou ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများပြပွဲမှတစ်ဆင့်၎င်း၏ Bole ကိုသာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကိုကြေးဝါ faucet...
တစ်ခုတည်းသောအအေးအင်တုံ faucet သည်အဓိကပစ္စည်းဖြစ်သောဆွဲငင်အားသွန်းခြင်းနည်းပညာကြောင့်ကြေးဝါကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အပြောင်းအလဲနဲ့သတ္တုများပုံသွန်းလောင်း, ဂရုတစိုက် polishing ။ တစ် ဦး ချင်းစီလိုင်းများရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ပါ။ ပို့ကုန်နှင့်အညီ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် ISO9001: 2015...
ကျေးဇူးပြု၍ Handy ကိုစက်ရုံတံခါးသို့သွားပါ။ ပထမဆုံး layout ကိုမိတ်ဆက်ပါ။ Handy စက်ရုံသည် 1500 ခန့်ရှိသည် စတုရန်းမီတာ, တံခါး၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရုံးareaရိယာနှင့်ပြပွဲခန်းမ, ညာဘက် အခြမ်းကကော်ဖီဆိုင်နှင့် ၀ န်ထမ်းနေရာထိုင်ခင်း၊ အလယ်တွင်စက်ရုံအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ အပါအဝင် သေတ္တာသွန်းခြင်း, illustrar, စက်, ရေစမ်းသပ်ခြင်း,...
Handy ၏ ကြေးနီဆောက်လုပ်ရေး Wash Basin Tap သည်ပွတ်ထားသော chrome ဖြင့် သုတ် ထားသော ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် / အနိမ့်ဆုံး aerator နှင့်တိကျသောကြွေကင်းသည့်အသုံးပြုမှုအတွက်တိကျသောကြွေထည်ပါဝင်သည့် Basin Cold Tap ။ ၏မျက်နှာပြင် Single Hole Basin Tap သည်အလွှာ ၅ လွှာအား electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ တပ်ဆင်ခြင်း ၊...
နေရာလေးကို ရေ အင် တုံ အအေးအအေး Chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ထည်ဖြင့် Star လက်ကိုင်နှင့်လက်ကိုင်အင် တုံအတွက် ၁ ဒသမ ၂ လက်မ ထိတိုင် သည်အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံများအတွက်အသုံးအနှုံးဆုံးဖြစ်ပြီးချွေတာသည်။ တစ်ခုတည်းသောအအေးခံ တိုင်အသာပုတ် Excellent ကကြွေထည်မြေထည်သည်သံသရာ ၅၀၀,၀၀၀...
Handy ၏ တစ်ခုတည်းသောတွင်းဝှမ်းထိပုတ်ပါ တန်ပြန်အင်တုံတပ်ဆင်မှုအောက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရေအေးသို့မဟုတ်ရေပူပေးရန်အတွက်အမြန်ဖွင့်သည့်အရာတစ်ခုကို Single Lever Basin Tap ။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ ထွက်ပေါက်ရှိ bubbler သည်စီးဆင်းမှုကိုပိုမိုပျော့ပျောင်းစေသည်။ Basin Cold Tap...
နေရာလေးကိုရဲ့ Chrome ကို finish ကိုကြေးဝါကိုဆေးကြောဝှမ်းပုတ်ထိုင်း, ကင်ညာနဲ့တူအပူပိုင်းနိုင်ငံများ၌အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်စီးပွားရေးအရရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်, အင်ဂိုလာ, တန်ဇန်းနီးယား, သီရိလင်္ကာစသည်တို့ကို Vandalic ခံနိုင်ရည်, chrome အဘယ်သူမျှမ H59 သောကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေးလူပျိုအေးမဏ္ဏိုင်ဘုံဘိုင်,...
Handy ၏ အချိန်နှောင့်နှေး Self Closing Basin Tap သည်တန်ပြန်အင်တုံများ၊ တစ်ပေါက်တည်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ တွန်းအားပေးသောရေထွက်ပေါက်၊ ကြေးနီဆို့ရှင်အဆို့ရှင်နှင့်နောက်ကျသောရေထွက်ပေါက်အချိန်ကာလသည် ၃-၈ စက္ကန့်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါ Hand Push down အင်တုံ faucet...
ရေဒီယိုသတ္တိကြွအင်ဂျင် တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကြွေအင်တုံတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောလေး ပွင့်ဖြင့်ကြယ်ပွင့်လက်ကိုင်ပါ သော Handy's Chrome အင်ဂျင်ဝိုင် ။ ရိုးရှင်းပြီးရက်ရောစွာပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်း၊ အရောင်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံသောကြေးဝါ ရေဆေးကြော သန့်စင်သည့်ကိုယ်ထည်၊ အရည်အသွေးမြင့်ကြွေသောအဆို့ရှင်အမာခံကို သုံး၍ Handy ၏ ၁ / ၂...
Handy's chrome Wash Basin Cold Tap သည်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးနီတည်ဆောက်မှုကို Chrome ဖြင့်သုတ်ထားသော anti-oxidation ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကြွေထည်မြေထည်သည်သံသရာ ၅၀၀,၀၀၀ ကိုယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန်အာမခံပေးပါသည်။ Single Hole Basin Tap ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လျှပ်စစ်သံချဲ့ခြင်းအထူသည် ၈ မှ ၁၂ မိုက်ခရိုမီတာဖြစ်သည်။...
ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ခိုင်ခံ့သောကြေးဝါတည်ဆောက်မှုကြောင့် Handy ၏ Single Hole Basin Tap ။ Wash Basin Tap မျက်နှာပြင်သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၄၈ နာရီဆားမြူစစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်အပေါ်ယံလွှာသည်တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။ Handy's Wash Basin Cold Tap...
Handy ၏ရေအေး ရေချိုးအင် တုံပက်သည်အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံများရှိစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးအကြမ်းခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ချေးသည်။ ချွေတာသော ကြွေထည်ဖြင့် သန့်စင်သောမြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါဆွဲငင်အားသည် သံသရာ ၅၀၀,၀၀၀ ကိုယိုစိမ့်မှုမရှိစေသည်။ Chromed Single Lever Basin Tap ၏မျက်နှာပြင်သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating...
Handy's ကြေးဝါအင် တုံ သည်ကန့်သတ်ချက် ဟောင်း ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးအကြမ်းခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ faucet ၏မျက်နှာပြင်သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ၄၈ နာရီဆားမြူမှုစမ်းသပ်ပြီးနောက်အဖုံးသည်တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။ Vandal သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးမြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှုကို...
ရေချိုးခြင်းအင်ဂျင်ဝှမ်း Cold Tap ကိုလိမ်လည်ပတ်သောခလုတ်ပါသော Handy Pillar Wash Basin Tap s - Chrome သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် ရေချိုးခန်းဝှမ်းထိုး အရာမှလာသည်။ ကြေးဝါမှထုတ်လုပ်ပြီး chrome တွင်အမြင့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်များအရ...
ဖက်ရှင်တစ်ခုတည်းအေးခုံတန်းရှည် Chrome Basin Faucet Washin Basin Cold Tap သည်အဆင့် A အဆင့် (အမျိုးသားအဆင့် ၅၉-၁) အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းသောကြေးနီသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြွေသည့်အရာတစ်ခုသည်ယိုစိမ့်မှုသံသရာ ၅၀၀၀၀၀ ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ faucet ၏မျက်နှာပြင်သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ၄၈...
Handy's Square အမျိုးအစားကြေးဝါ အိမ်သာဆေး , Vandal- ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လီဗာလက်ကိုင်နှင့် aerator ။ တာရှည်ခံစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အကြွေစေ့ disc valve သည်စက်မှုလုပ်ငန်းသက်တမ်းစံနှုန်းများကိုနှစ်ဆကျော်စေသည်။ Single Lever ဝှမ်းတုတ် ၏မျက်နှာပြင် သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ တပ်ဆင်ရန်၊...
Handy's Wash Basin Cold Tap သည်အပူပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောအီကွေဒေါ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကင်ညာ၊ အန်ဂိုလာ၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ သီရိလင်္ကာစသည့်လူကြိုက်အများဆုံးလူကြိုက်များသည့် တစ်ခုတည်းသောရေဆေးရေကန် ၏အဓိကကိုယ်ထည်မှာ အဆင့် A အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်သောကြေးနီသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် (အဆင့် ၅၉) ။ -1) ။ faucet ၏မျက်နှာပြင်သည် ၅...
ဒီတစ်ခုတည်းသောအအေးခံအင်ဂျင်မှာအထူ electroplated chrome၊ anti- ဓာတ်တိုး, တောက်ပသောအရောင်။ အဆိုပါအဆို့ရှင် core ကိုတင်သွင်းကြွေအဆို့ရှင် core ကိုချမှတ်နှင့်တပ်ဆင်ထားသည် ချောမွေ့ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအလွိုင်းလက်ကိုင်နှင့်အတူ။ အဆိုပါ faucet ရေတင်းကျပ်စွာစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့သည် စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီဖိအား၊...
ယနေ့ လူတိုင်းအတွက် Handy ရေချိုးခန်းဝှမ်းထိုးပုတ် များကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည် - နေရာလေးပါ ဝှမ်း faucet ထုတ်လုပ်သူရဲ့ Basin Cold Tap အားလုံး - ကြေးနီသတ္တုများပုံသွန်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသည် အရင်းအမြစ်မှရေကိုထိန်းချုပ်။ bubbler ပါသော spout သည်အညစ်အကြေးများကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည် ရေသည်နူးညံ့ပြီးထိတွေ့မှုကပိုမိုသက်သာစေသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ ဝှမ်းအေးထိပုတ်ပါ ပေးသွင်း
ကိုလံဘီယာ၊ ကင်ညာ၊ အင်ဂိုလာ၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ သီရိလင်္ကာစသောအပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံများတွင်ရေပန်းစားသည်။ အဓိကကိုယ်ထည်ကိုအဆင့် A အဆင့် (အမျိုးသားအဆင့် ၅၉-၁) ဖြင့်သန့်စင်သောကြေးနီသတ္တုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ faucet ၏မျက်နှာပြင်သည် ၅ လွှာအလွှာရှိသော electroplating ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ၄၈ နာရီဆားမြူမှုစမ်းသပ်ပြီးနောက်အဖုံးသည်တောက်ပနေဆဲဖြစ်သည်။ ရေအေးအင်တာနက်တပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည်။
လူပျို Hole အင်တုံရောနှော
လူပျို Hole အင်တုံရောနှော Faucet